Nabani na amabhinqa amaphupha okuba nelinen epholileyo kunye nebala elihle, elihle. Okwangoku, kukho inani elininzi lokumisa lithetha ukuba ngumcimbi wexesha lokuphumeza umphumo "womntu ongcono". Ngombulelo kwii-creal ezahlukene kunye nama-penking pencil, ungazifihla iingxaki ezahlukeneyo zesikhumba, umzekelo, ukuvuvukala, i-freckles, njl.
Amantombazana amaninzi akakwazi ukugqiba oko kukubaluleke kakhulu: ipencilisi okanye isiseko? Abaculi abazenzayo baphendule lo mbuzo ngokungacacile - ukulungiselela ngokugqibeleleyo, kufuneka usebenzise ipenciliti yokumisa kunye nesiseko. Kubalulekile ukungadibanisi la ma-agent angama-masking amabili. Okokuqala kufuneka uqonde ukuba yintoni umehluko phakathi kwabo.
Ngoko, isiseko ngokuyinhloko i-cream yosuku ene powder. Ithengiswa kumatyhu okanye kwizibilini. Isetyenziselwa njengesiseko sokwenza, i-mask impazamo, idlulisa umbala kwaye iguqula isikhumba esingenalo. Ikhusela ubuso kunye nelanga nomoya.
Ipencil ye-masking isetyenziswe njengesiseko sesiseko. Kuthengiswa ngohlobo lwe-lipstick okanye ipeni ye-tip. Isetyenziselwa ukufihla iziphene ezincinane: izibonda ezimnyama phantsi kwamehlo, iimpumlo, izibazi ezincinci, iintlobo zee-pigment, i-pigment spots kunye nezinye ukungapheleli kwesikhumba. Iipencilisi zenzelwe ukufihla indawo ezincinci zesikhumba kwindawo.
Ngoku siza kuqonda indlela yokugubungela kakuhle ukungafezeki kwesikhumba ngezi zixhobo. Sisazi ukuba ipencil ye-masking iyadingeka ukuze kulungiswe iintlobo zokungafezeki kwesikhumba.
Ngoko ke, okokuqala ipencilisi yokugubungela kunye nezibetho zokukhanya ziya kusetyenziswa phantsi kwamehlo, ngoko ke kwezinye iindawo ezingxaki. Into ephambili ukuchuma kakuhle. Khumbula ukuba ipensela kufuneka ibe yinto yokukhanya ithoni ngaphezu kwesiseko. Kwaye ukuze "uhlaziye" umbala kwaye wenze ukubonakala kuvulekele, kungcono ukusebenzisa itoni emhlophe ipencil phantsi kwamehlo.
Kwiimpumpo kungcono ukusebenzisa i-penkingclerial or anti-inflammatory penking pencil, okungeyikufihla izibhokhwe kuphela, kodwa iyakwazi ukulwa nabo. Kodwa iindlela ezinjalo kufuneka zichaneke ngokuchanekileyo kwaye zichaneke kwi-pimple, njengoko zomelela kakhulu isikhumba.
Kwaye, ngokubanzi, zonke iipencilisi zokugaya kufuneka zisetyenziswe ngokucophelela, kuba ukuba wenza iinqununu ezinkulu okanye ufihla indawo enkulu ebusweni, unokufikelela kwimpembelelo ye "mask". Ngoko ke, kungcono ukuba ungadluli nge pencil. Faka isicelo kwiindawo ezincinci zesikhumba kunye nenani elincinci lokubamba ipensela.
Emva kokuba ipencil ye-masking ihlanganiswe nazo zonke iingxaki zesikhumba ezincinane, sebenzisa isiseko. Uya kunika ukuphelela kwindlela yakho yokwenza. Ulusu lobuso luya kubonakala lubushelelekile kwaye lubukhali.
Yaye ukhumbule ukuba isiseko asisetyenziselwa ukugubha izibhunqa okanye ukugubungela izangqa phantsi kwamehlo.
I-cream ye-tonal ifanele isetyenziswe ngokukhawuleza ukusuka kumbindi ebusweni kunye nemida yayo. Kwaye isiphumo sinqamle kunye noqweqwe oluncinci lwe-powder.
Kanye kunye nepencil ye-masking, kwaye isiseko singenza ebusweni bakho umphumo we "mask". Ukukhusela oku, kufuneka ukhethe ngokufanelekileyo umbala wesiseko. Ukwenza oku, sebenzisa ukhilimu kwisitramu - akufanele kubekho umahluko phakathi kombala wesikhumba sakho nesiseko. Ngenxa yobume bendalo, kungcono ukusebenzisa onke amanxusa e-masking emini.
Kubalulekile ukukhetha isiseko sohlobo lwakho lolusu.
Ukuba unomphunga owomileyo, ukremuza kunye nentsholongwane okanye umkhiqizo ococekileyo uya kwenza. Ezi zigrama aziyizixhobo ezinobumba kwaye zinemibala engaphantsi kuneziqhamo eziqhelekileyo. Enyanisweni, bayazibamba ngokugqithiseleyo, kodwa kukhululekile kakhulu kwesikhumba esomileyo. Yisebenzise kangcono nge siponji elisezantsi amanzi.
Ngesikhumba esinamafutha, kufuneka uthenge isiseko esisisiseko ngaphandle kweoli okanye isiseko esisebenza ixesha elide.
Kwaye ukuba unesilwanyana esikhobeneyo, isiseko esisisiseko saso sifanelekile. Iindlela ezinjalo zeetonal ziquka i-pigment kunye nesiseko se-liquid. Kulula ukufaka isicelo esikhumbeni, zilungelelaniso ezincinci ezincinci, kwaye kulula ukuba ngumpu. Kwikhumba elomileyo, le krimu iya kunzima ukuthunjwa.
Xa usebenzisa isiseko, unako kwaye ungasebenzisi ipencilisi yokugubungela, ukuba awunalo naluphi na ukungafezeki kwesikhumba kwaye ufuna nje ukuphakamisa umbala okanye ukunika "ukutsha."
Kwakhona, ipencil ye-masking ingasetyenziswa ngaphandle kokusebenzisa isiseko. Kodwa kulo mzekelo ipensela yakho iya kubonakala ebusweni.
Ngoko, ukususela ngasentla, sinokugqiba ukuba ipencilisi yokugubungela ibhetele ngokufanelekileyo ukugubungela izikhumba ezincinci zesikhumba, kwaye isiseko silungele ukucosa ubuso.
Kwaye iikhompyutheni ezenza iinjongo ezifanelekileyo zibonelela ngokulandelelana okulandelayo ukusetyenziswa kwee-agent zangasese esikhumbeni:
1. Ucoceko oluthile - ukuphucula isikhumba;
2. I-Tonal base-for smoothing the surface of the skin;
3. I-penking ipencil - ukufihla iintsilelo ezincinci;
4. I-khamera ye-tone - ukugqithisa ubume, ukwenza u-make up uphelele kwaye ukhusele ulusu kwindawo;
5. I-powder - ukulungisa umququzelelo nokuphelisa ukukhanya kwesikhumba.
Ngoku uyazi okubalulekileyo: ipencilisi okanye isiseko, kunye nendlela yokuwasebenzisa ngokuchanekileyo.
Indlela yokulahla iingxaki zesikhumba ngokukhawuleza
Iilensi ezinemibala ebomvu
Ukuphelisa imibimbi ebusweni ekhaya
Ubuso beKhemikhali bebuya ekhaya
Ziziphi iimpawu ezifunekayo endizenzayo kwesikhumba esikhulileyo
Indlela yokususa imibimbi ebunzini
Sisiphi isimbo seengubo zokukhetha i-plump?
Ziziphi iintlobo zabantu abafazi abathanda ukunika izipho?
Isiqhamo esiluncedo kakhulu kwesikhumba esihle
Imenyu esondeleyo yokutya kwesonka
ULera Kudryavtseva noSergei Lazarev bacula okokuqala nge-duet, ividiyo
Iintlanu ezisixhenxe ezinomama omhle
Ingaba kaninzi kuyingozi ukusela utywala ngamanani amancinci?
Indlela yokucoca ama-mushroom ekhaya kunye no-anyanisi kunye nezimbiza ezineviniga. Ukupheka kwamakhowe asetyenzisiweyo kunye neendunduma ebusika
Indlela yokuphilisa umlenze emlenzeni eduze kwesiqwenga
Indlela yokukhetha umbala weengubo ngombala
Ikhekhe le Mississippi
Umfazi ozisa uvuyo
Iindlela zokunyanga iingxaki zesifo
Indlela yokutya i-feijoa: indlela yokutya ngokufanelekileyo feijoa